Sheekada filimka The Foreigner: Jackie Chan caadalada uu u baahan maka heli doonaa Pierce Brosnan – Filimside.net
Sheekada filimka The Foreigner: Jackie Chan caadalada uu u baahan maka heli doonaa Pierce Brosnan
October 16, 2017 Zakarie Abdi
Filimka The Foreigner waxaa la isugu keenay labo ruug cadaa oo caalamka magac weyn ku leh Jackie Chan iyo Pierce Brosnan waana mashruuc China iyo Britain isla sameeyeen.
Filimka The Foreigner waxaa Director ka ah Martin Campbell kaasi oo horey u sameeyay filimada caanka ah sida (Goldeneye, Casino Royale) waxaana filimkaan lagu saleeyay sheekadiisa buuga hirgalay The Chinaman (1002( ee uu qoray Stephen Leather.
Dulucda Fariinka Filimke The Foreigner: Ngoc Ming Quan (Jackie Chan) waa 60-jir hawl gab ah kana tirsanaan ruug cadaayaashii dagaalka Vietnam ka qayb qaateen haatana London ayuu maqaayad ku leeyahay balse noloshiisa waxay qarib meysaa markii gabadhiisa dhalinta yar lagu dilo qarax bambo oo ka dhacaayo baqaar London ku yaalo laguna eedeenayo inay ka dambeeyeen guruubka Irishka ah Authentic IRA.
Quan (Jackie Chan) wuxuu isku dayaa inuu gabadhiisa u aargudo asigoo marka hore la kulmaayo sarkaal ka tirsan waaxda sirdoonka UK Richard Bromley (Pierce Brosnan) si uu kaga caawiyo u sheegista magacyadii raggi ka dambeeyay qaraxyadii gabadhiisa ku geeriyootay laakiin waxba kama helaayo oo xog ah.
Kadib Quan wuxuu la kulmaa wasiir ku xigeenka Ireland Liam Hennessy (Pierce Brosnan) kaasi oo horey kooxda IRA kaga tirsanaan jiray laakiin waa sarkaal hada dowlada Ingiriiska la shaqeeyo.
Liam Hennessy (Pierce Brosnan) wuxuu ku qancinaa Quan (Jackie Chan) inuusan waxba kala soconin duqeyntii shacabka lagu laalay sidoo kalena uusan waxba ka caawin karin.
Quan (Jackie Chan) ma aaminaayo hadalka Liam Hennessy (Pierce Brosnan) wuxuuna ku sameenaa dabagal xoogan kaasi oo uu ku ogaanayo in Liam Hennessy (Pierce Brosnan) wax walbo ka warqabo sidoo kalena kiiskaan saameyn weyn ku leeyahay.
Hadaba Quan (Jackie Chan) banaanka ma u soo saari doonaa wajiga dhabta ah Liam Hennessy (Pierce Brosnan) sidoo kalena gabadhiisa cadaalada ay u baahan tahay ma heli doontaa madaama duqeyn lagu dilay ayadoon waxba galabsanin?
Maxaa Laga Yiri Fariinta Filimka The Foreigner: Director Martin Campbell fariin cusub lama imaanin waana fariimahii horey loo sameyn jiray balse nasiib wuxuu ku leeyahay in labo ruug cadaa uu filimkiisa hogaamiye kaga dhigay kuwaas oo The Foreigner xiiso gaar ah u yeeleen dartooda ayaana filimkaan min bilaaw ilaa dhamaad loo daawan karaa.
Bandhiga Jilaayaasha: Labo halyee ayaa shaashada iska heleen Jackie Chan iyo Pierce Brosnan oo xumaan cad matalaayo waxayna ka dhigeen filimkaan mid xiiso gaar ah leh siweyna ugu xifaaltameen dhanka shaashada.
Jackie Chan weli waa Superstar-kii kartida badnaa sidoo kalena door walbo u cadaalad fali karo waxayna iska hor imaadeen Pierce Brosnan oo isagana cagta cagta u saaray Chan xifaaltan iyo xeelad wacan ayay filimkaan xiisaha badan kusoo bandhigeen.
Gunaanad: The Foreigner waa filim Action, sirdoon iyo qayaano isku jiro sidoo kalena xambaarsan sheekooyinkii hore loo sameyn jiray balse qaab jiliinka Jackie Chan iyo Pierce Brosnan ayaa mashruucaan ka dhigay mid daawashadiisa lagu raaxeesan karo waxaana la siiyay 3/5 ama sedex dhibcood fariintiisa taasi oo ka dhigan in la daawan karo filim ahaan.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka The Foreigner:
Goos Gooska 1-aad:
Goos Gooska 2-aad:
Waxaa Aqrisay 1,014